မားကတ်တင်းဝန်ထမ်းတွေအတွက် ဘယ်အရည်အချင်းက အရေးပါဆုံလဲ? - MyLasar.com
နိုင်ငံတကာ Paylab Data Research အချက်အလက်တွေအရ ကျွမ်းကျင်မှုရှိတဲ့မားကတ်တင်းသမားဖြစ်လာစေဖို့ မဖြစ်မနေလိုအပ်ချက်က ဈေးကွက်နဲ့မျက်ခြေမပြတ်ရှိနေဖို့လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီစစ်တမ်းကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီ ၂၀၁၉ က ကောက်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဥရောပ ၅ နိုင်ငံပါဝင်တဲ့ အရောင်းကျွမ်းကျင်သူ၊ မားကတ်တင်း၊ PR၊ ကြော်ငြာနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းအသီးသီးတို့မှာ ကျွမ်းကျင်သူ ၆၃၁ က ပါဝင်ဖြေဆိုထားတဲ့ စစ်တမ်းဖြစ်ပါတယ်။၂၀၁၉ ခုနစ် မေလ ၂၉ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ Slovenia နိုင်ငံရှိ Portorož မြို့မှာ မှာပြုလုပ်တဲ့ မားကတ်တင်းပွဲတစ်ခုမှာ ဒီစစ်တမ်းကို တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစစ်တမ်းကို Slovenia, Croatia, Hungary, the Czech Republic နဲ့ Slovakia နိုင်ငံတို့မှာ ကောက်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီး Slovenian Marketing Association နဲ့ မီဒီယာအဖွဲ့အသည်း Styria.com ပူးပေါင်း ဆောက်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Paylab portal အရ မားကတ်တင်းသမားတစ်ဦးဟာ နိုင်ငံတစ်ခုချင်းစီအလိုက် ပုံမှန်လစာရနေရင် ကျေနပ်ကြ တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ Slovenia မှာတော့ မားကတ်တင်းသမားတစ်ဦးရဲ့ ပျှမ်းမျှလစာဟာ € 1910 ရှိပါတယ်။
ဒီဂျစ်တယ်မားကတ်တင်းနှင့် ဒီဂျစ်တယ် Channel များ
မားကတ်တင်းနဲ့အခြားဆက်စပ် ဌာနတွေဟာ နည်းပညာတိုးတက်လာမှုနဲ့ စားသုံးသူရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို အမြဲမျက်ခြေမပြတ်လေ့လာနေဖို့လိုပါတယ်။ စစ်တမ်းရဲ့အဆိုအရ နောက်ပိုင်းမှာ အလုပ်ရှင်တွေ မျက်စိကျလာမဲ့ မားကတ်တင်းသမားတွေဟာ ဒီဂျစ်တယ် Channel နဲ့ ဒီဂျစ်တယ်မားကတ်တင်းကို ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေလို့ ဆိုပါတယ်။
မားကတ်တင်း၊ PR နဲ့ ဈေးကွက်ကြော်ငြာကျွမ်းကျင်သူတွေဟာ ဒီဂျစ်တယ်မားကတ်တင်းကို အမြင့်ဆုံးနေရာအဖြစ် မြင်ကြပြီး မားကတ်တင်းသမားတစ်ယောက်ဟာ မားကတ်တင်းဗျူဟာကို အစကနေအဆုံးသေချာရေးဆွဲတတ်ဖို့ လည်း အလွန်အရေး ပါလာပါပြီ။ အရောင်းကျွမ်းကျင်သူတွေအနေနဲ့လည်း လိုအပ်ရင် လိုအပ်သလို4Ps (Product [ကုန်ပစ္စည်း], Price[ဈေးနှုန်း], Place [နေရာ] and Promotion [အရောင်းမြှင့်တင်ရေး]) တို့ကို နားလည်ပိုင်နိုင်နေ ဖို့လိုပါတယ်။ ဒီဂျစ်တယ်မားကတ်တင်းနောက်မှာ ထပ်မံအရေးကြီးတဲ့အရာတွေကတော့ Branding၊ ဦးတည် ထားတဲ့စားသုံးသူများနဲ့ ဈေးကွက်သုတေတနပြုခြင်း တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မားကတ်တင်းရဲ့ အခြားနယ်ပယ်တွေဖြစ်တဲ့ User Experience, Social Media Management, Event Management, Copyrighting and Media တို့ကတော့ အောက်ဆုံးနေရာမှာ ရှိနေပြီး ကုမ္ပဏီကိုနောက်ကနေပံ့ပိုးတဲ့ နယ်ပယ်မှာ ရှိနေပါတယ်။
မားကတ်တင်းကျွမ်းကျင်သူတွေဟာ ကုန်ပစ္စည်း၊ ယင်းကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်ကို ထိုးဖောက်ဖို့နဲ့ ဝန်ဆောင်မှုအပိုင်းတွေမှာ စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်လာအောင် ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပြီး အသင်းအဖွဲ့ကြား ကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်ရဖို့ကိုလည်း ဦးဆောင်နိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ အနာဂတ်မှာ အလုပ်ရှင်အများစုက ပရောဂျက် စီမံခန့်ခွဲမှု အရည်အချင်းရှိတဲ့ မားကတ်တင်းသမားတွေကို လိုအပ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဖြေဆိုသူတွေအနေနဲ့ နောက်ထပ် highlight လုပ်တာကတော့ Business Development အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၅ နှစ်အထက် အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ ကျွမ်းကျင်သူတွေကို လိုအပ်လာပြီးလုပ်ငန်းသဘောကို တစ်ခုချင်းစီးပွားရေးပုံစံတွေ နည်းလမ်းခြင်းကလည်း လိုအပ်တဲ့အရည်အချင်းတစ်ရပ်ဖြစ်လာပါတယ်။ လူထုခြားဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်း /တင်ဆက် ခြင်း (၂၅ ရာခိုင်နှုန်း) ဟာလည်း မားကတ်တင်းသမားတစ်ယောက်အတွက် လိုအပ်တဲ့အရည်အချင်းတစ်ခုပါပဲ။
မားကတ်တင်းဆိုတာ အရောင်းတွေကို ပံံ့ပိုပေးခြင်းဆိုတာကို နားလည်နေရမှာဖြစ်ပြီး ဒါကြောင့်ပဲ စီးပွားရေးအမြင်နဲ့ တွေးခေါ်မှု ရှိခြင်း အရမ်းကိုအရေးပါတဲ့အရည်အချင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်တမ်းအရ ဒီအရည်အချင်းဟာ စစ်တမ်းကောက်ယူတဲ့နိုင်ငံတိုင်း ရဲ့ အရေးပါတဲ့အရည်အချင်းလို့ ဖော်ပြနေပါတယ်။ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းသော ဖြေဆိုသူတွေဟာ ဒါကို မားကတ်တင်းသမားတစ်ယောက် ရဲ့ အရေးပါဆုံးအချက်အဖြစ် ဖြေဆို ထားပါတယ်။
စိတ်ကူးစိတ်သန်းကောင်းမွန်ခြင်းနဲ့ ကုန်ပစ္စည်းကို မြှင့်တင်ဆောက်ရွက်တတ်မှုတို့ဟာလည်း မားကတ်တင်း သမား တစ်ယောက် အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေ ရရှိစေမယ့် အရည်အချင်းလို့လည်း ဆိုထားပါ သေးတယ်။
အရောင်းကျွမ်းကျင်သူ၊ မန်နေဂျာတို့နဲ့ မားကတ်တင်း၊ PR နဲ့ ဈေးကွက်ကြော်ငြာကျွမ်းကျင်သူတွေ ဖြေဆိုချက်ကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒီဇိုင်းပိုင်းအတွေ့အကြုံနဲ့ statistics and analytics တို့ရဲ့ အချက်အလက်တွေကို သုံးသပ်ချက်က ပိုအရေးပါတယ်လို့ ဖြေဆိုထားပါတယ်။
ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုတတ်မှုက မားကတ်တင်းသမားအတွက် အရေးပါတယ်
မားကတ်တင်းဆိုတာ လျှင်မြန်စွာရွေ့လျားနေတဲ့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အလုပ်လျှောက်မယ့်သူ တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ အရည်အသွေးတွေနဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုတွေ၊ ပညာအရည်အချင်းတွေကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့ပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ငန်းပဲ ဖြစ်ဖြစ် အသက်အရွယ်ပေါင်းစုံဟာ အလုပ်ခွင်မှာ တွေ့ရစမြဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျွမ်းကျင်တဲ့မားကတ်တင်းသမားဖြစ်ဖို့ဆိုတာ အရေးကြီးဆုံးအနေနဲ့ လူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုက ထိပ်ဆုံးအရေးပါတယ်လို့ စစ်တမ်းမှာ ပြထားပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုကပဲ အများအားဖြင့် အလုပ်ရရှိဖို့အတွက် အရေးပါနေတတ်ပါ တယ်။ ၃၇ ရာခိုင်နှုန်းသောဖြေဆိုသူတွေက အနာဂတ်မှာအောင်မြင်တဲ့ မားကတ်တင်းသမား ဖြစ်ဖို့အတွက် ဒီအရည်အချင်း လွန်စွာအရေးပါကြောင်း ညွှန်းဆိုပြနေပါတယ်။
အခြားလိုအပ်တဲ့အရည်အချင်းတစ်ရပ်ကတော့ အသင်းအဖွဲ့နဲ့လုပ်ဆောင်တတ်ခြင်းပါပဲ။ မန်နေဂျာရာထူးဆိုရင်တော့ ခေါင်းဆောင်နိုင်စွမ်းပါ လိုလာပြီဖြစ်ပါတယ်။
အနာဂတ်မှာ မာကတ်တင်းသမားတွေ ဘယ်လိုအရာတွေအသုံးပြုနိုင်လဲ?
မားကတ်တင်းသမားတွေအနေနဲ့ အမျိုးမျိုးသော ပရိုဂရမ်တွေနဲ့ Tools တွေကို လုပ်ငန်းအတွက် အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ MS Excel ကတော့ မဖြစ်မနေကို တတ်ထားရမဲ့ပညာပါ။ အစီရင်ခံစာတိုးတက်မှုမှတ်တမ်းတွေ၊ စိစစ်လေ့လာချက်တွေကို အချိန်တို အတွင်း အထက်ကို တင်ပြနိုင်ဖို့အတွက် MS Excel ကိုတော့ ကျွမ်းကျင်ရပါတယ်။ နောက်ထပ်အရေးပါတဲ့ tool ကတော့ MS PowerPoint ပါပဲ။ မားကတ်တင်းသမားဆိုတာ လုပ်ငန်းအတွင်း/လုပ်ငန်းပြင်ပမှာ Presentation လုပ်ရလေ့ရှိတတ်တော့ ဒါကိုလည်း တတ်ထားသင့်ပါတယ်။ MS Word ကတော့ အမြဲသုံးနေရတတ်တဲ့အရာတစ်ခုပါ။ ခြုံပြောရရင် မဖြစ်မနေ အရေးပါ တဲ့ tool ၁၀ ခုမှာ ကျန်တာကတော့ Google analytics, E-mail clients, Facebook Ads Manager, Google Ads Manager, Adobe Photoshop, CRMs and Adobe InDesign တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာသင်ယူခြင်းဟာ ကျွမ်းကျင်တဲ့မားကတ်တင်းသမားဖြစ်လာစေဖို့ သိပ်ကိုအရေးပါပြီး နောက်ဆုံးပေါ် အရာတွေကို အမြဲမျက်ခြေမပြတ်လေ့လာဖို့ လိုပါတယ်။
စစ်တမ်းထဲမှာ မားကတ်တင်းသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ အနာဂတ်မှာ ဘာတွေကို အဓိကထားလေ့လာသင်ယူဖို့ လိုလဲ ဆိုတာကို မေးထားပါတယ်။ အပေါ်ဆုံးအဖြေအနေနဲ့ စီးပွားရေးရှုထောင့်မှာ လူတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုစိတ်ပညာကို လေ့လာဖို့ လိုပြီး soft skills တွေကို ထပ်မံသင်ယူဖို့လိုတယ်လို့ ဖြေထားပါတယ်။ Product development, design thinking and project/service design တွေကိုကတော့ နောက်ထပ်လေ့လာဖို့လိုအပ်တဲ့ပညာရပ်တွေလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါဟာ ကုမ္ပဏီ အသေးစား၊ ကုမ္ပဏီအလတ်စား၊ ကုမ္ပဏီကြီး အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးမှာရှိတဲ့ နည်းဗျူတာကျွမ်းကျင်သူတွေက ဖြေဆိုထားတဲ့ အဖြေတွေဖြစ်ပါတယ်။